Dharka Ilmaha, Dharka Carruurta, Dharka Dhallinta - JiaTian
Dhar raaxo leh, jilicsanaan iyo dareen fiican, shaqo aad u fiican, oo aad ugu habboon in lagu xiro diirimaad.
Dharka waa khafiif, jilicsan, hygroscopic mana cuncun maqaarka.
Hebei JiaTian Import & Export Co., Ltd. ， oo la aasaasay 2002, kuna saleysan magaalada Shijiazhuang province Hebei, ayaa ku hawlan dhoofinta dharka in ka badan toban sano. Waxaa la aasaasay macaamil ganacsi muddo dheer ah oo lala yeelanayo Yurub, Koonfur Afrika iyo meelo kale iyo alaabooyin u badan dhallaanka iyo dharka carruurta. tan iyo markii la aasaasay, shirkadeena waxay u hogaansantaa mabda'a "kalsoonida iyo hufnaanta" marka hore ， wax ku ool ah oo hal abuur leh ， oo la taagan mabaadi'daas, waxaan xoojineynaa isku xirnaanta iyo iskaashiga macaamiisha.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee usbuuca
Zhang Qinghui, oo ah gudoomiyaha Ururka Naqshadayaasha Dharka ee Shiinaha, ayaa fasiray waxyaabaha muhiimka ah ee toddobaadkan moodada ah, “Toddobaadkan moodada ahi wuxuu daboolayaa dharka haweenka, dharka ragga, dharka arooska, dharka, kabaha, boorsooyinka, iwm. kara ...
Alice Jacob oo shan jir ah ayaa u dhaqdhaqaaqda barashada ...
Alice Jacob oo shan sano jir ah dhaqdhaqaaqe waxay baraneysaa nolosheeda bilowgeeda in u istaagida waxaad aaminsan tahay ay runti isbedel sameyn karto. Yacquub wuxuu markiisii ​​hore magac sameystay horaantii bishaan, markii Washington Post ay daabacday warqad ay u qoreysay agaasimaha guud ee shirkadda Gap Jeff Kirwan, oo ay ku weydiisaneysay wax ka yar gir ...